Waxaad haysataa iPhone 6s ama 6s Plus oo aan daarin barnaamijka beddelka | Wararka IPhone
Haddii aad haysatid iPhone 6s ama 6s Plus ah oo aan daari doonin, hubi barnaamijka bedelka cusub ee Apple
Apple waxay ka mid tahay shirkadaha sida aadka ah u daryeela macaamiisheeda waxaanan taas uga idhaahdaa khibradeyda gaarka ah ee dhibaatooyinka yar ee aan horay ugu haystay qaar ka mid ah qalabka shirkadda. Munaasabaddan awgeed, ololayaasha beddelka ama barnaamijyada ay ku fuliyaan waqti ka waqti ayaa loo yaqaan dhammaan adeegsadayaasha waana tan cusub ee daboolaysa iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus ayaa la iibiyay intii u dhaxeysay Oktoobar 2018 iyo Ogosto 2019.
Haa, waa suurtagal in xilligan aanad dib u eegin moodalladan iPhone-ka ah laakiin qiimaha hooseeya (da'dooda darteed) dadka isticmaala ka dhigaan inay iyagu eegaan wixii ay iibsanayaan oo hadda cillad lagu ogaadey aaladda dabka dhaliya ayaa keenta Apple ka bilaw barnaamijkan beddelka bilaashka ah ee kuwa ay saameeyeen.
Waxaad haysataa iPhone 6s ama 6s oo lagu daray ma daarayo eeg lambarka taxanaha ah
Waxay u muuqan kartaa wax adag in la fiiriyo tirada taxanaha ah ee iPhone ee aan shidanayn, laakiin way ka fududdahay sida ay umuuqato waana taas in lambarkan lagu daro dhammaan kiisaska iPhone sidaa darteed way fududahay in la helo oo la arko haddii iPhone 6s ama 6s Plus oo aan daarneyn ayaa saameynaya dhibaatadan waxaanan ka heli karnaa cutub cusub dukaanka rasmiga ah ee shirkadda.
Websaydhada ay tahay inaan ku galno xogta sida caadiga ah qaybta gaarka ah ee Apple ee barnaamijyada beddelaadda. Gelitaanka qaybtan web waan awoodi doonaa Gali nambarkayaga taxanaha ah oo fiiri haddii ay na saameyneyso dhibaatadan dabka. Caqli ahaan, kuwa iibsaday iPhone-ka markii la bilaabay uma baahna inay fiiriyaan, maaddaama taariikhaha iibsiga ansaxku yahay kuwo dhowaan soo ifbaxay sida ku cad bilowga maqaalka. Xusuusnow in iPhone-kani uu suuqa soo galay sanadkii hore 2015 sidaa darteedna ay yihiin moodello duug ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 6s Plus » Haddii aad haysatid iPhone 6s ama 6s Plus ah oo aan daari doonin, hubi barnaamijka bedelka cusub ee Apple
Laakiin sidee ayan xal u siin karin haddii ay yihiin moodello ku hoos jira damaanad !!! Waxay haystaan ​​ugu badnaan 1 sano. Soo-saare kasta waa inuu keenaa xal.
Warbixinnada Macaamiisha Magacyada iPhone 11 Pro Taleefannada ugu fiican